သိမ်းမြစ်ထဲရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြနိုင်တဲ့မျက်လှည့် ဆရာ
မျက်လှည့် ပညာရှင်အများစုကတော့ မယုံကြည်နိုင်လောက်ဖွယ်ရာပြကွက်တွေကို လူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံကို
ဒါပေမယ့် အများစုဖြစ်သောသူတို့ ပြသနိုင်တာက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲရှိတာပါ....
မျက်လှည့် လောကတွင် ဒိုင်နမိုဟု ထင်ရှားကျော်ကြားကာ ၎င်းအမည်အရင်းအနေဖြင့် စတိဗ်ဖရိန်း ဟုခေါ်
သော မျက်လှည့် ဆရာကတော့ တစ်ကယ့် ကိုလှပသေသပ်သည့် ပြကွက်၊ လူတိုင်းပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်
စေသည့် စွန့် စားခန်းအဖြစ် (မြစ်ထဲတွင် မည်သည့် ပစ္စည်းအကူအညီမျှမပါပဲ) ရေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ပြ
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဘရက်ဖို့ အရပ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ သူ မျက်လှည့် ဆရာဟာ လန်ဒန်မြို့ ပါလီမန်လွှတ်
တော်အဆောက်အဦရှေ့ ရှိသိမ်းမြစ်ထဲတွင် ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြနေခဲ့ သည်မှာ မြစ်လယ်တစ်ဖက်ကမ်း
သို့ ပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် ၎င်းအား မြစ်အတွင်းရဲကင်းလှည့်မော်တော်ဘုတ်မှ လာရောက်
မြစ်လယ်ကောင်အထိရောက်အောင် ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ ...
ရှာမှရှားတဲ့ မျက်လှည့် ဆရာပါပေ...
မျက်လှည့် ပညာမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်တယ်...ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်အတွက်
ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေသည့် ရေပေါ်လမ်းလျှောက်မျက်လှည့် ပြကွက်အား ၀က်မင်စတာတံတားပေါ်မှ
ပရိတ်သတ်များ အံ့ သြမင်သက်မိစွာဖြင့် ကြည့် ရှုနေကြစဉ်....
လွှတ်တော်ကြီးဆီကိုများ အလည်သွားလေတော့ မလား...
Tread carefully: Dynamo gets his feet wet and heads towards the Houses of Parliament
မျက်လှည့် ဆရာဖရိန်းကတော့ ယခုအခါမှာ ၎င်းရဲ့ အံ့ သြထူးဆန်းဖွယ် လှည့် စားချက်၊ ပြကွက်များကြောင့် 
ဆပ်ကပ်လောကမှာတော့ အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် ဆပ်ကပ်သမားတစ်ဦးအဖြစ် နာမည်ဂုဏ်သ
တင်း ဖြစ်တည်စေနိုင်ခဲ့ ပါပြီ....
၎င်းရဲ့ အစွမ်းအစကို ကြည့် ရှုအားပေး လက်ခံကြသည့် နာမည်ကျော်တွေထဲမှာ Jay-Z ၊ Coldplay ၊ Will
Smith ၊ Busta Rhymes နှင့် Paris Hilton တို့ တောင်ပါဝင်ကြပါတယ်...
၎င်းပြသခဲ့ သည့် နာမည်ကျော်ပြကွက်များတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ သရုပ်ဆောင် မက်လူးကပ်စ် ကို အာဆင်နယ်
အသင်းရဲ့ အဲမရိတ်ကစားကွင်းမှာ လေထဲမြောက်နေအောင် ဈန်ပျံစေခဲ့ သလို အောက်တွင်တင်ဆက်ထား
သည့် ဗီဒီယိုကလစ်တွင်ကြည့် ရှုနိုင်သည့် ဘီဘီစီ အားကစားသတင်းအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ရော်ဘီဝီလီယံ နှင့် ဒါဗီနာမက်ကော တို့ ရှေ့ မှောက်တွင် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ထီလက်မှတ်များကိုလည်း ပိုက်ဆံအဖြစ်
အံ့ သြထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲ ပြနိုင်ခဲ့ တာတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတင်ဆက်ပြသနေခဲ့ သည့် ပြကွက်ဆန်းအစီအစဉ်အသစ်များတွင် ကမ္ဘာ့ ဟဲဗီးဝိတ် လက်ဝှေ့ ချံပီယံ ဒေး
ဗစ်ဟေး၊ မန်ချက်စတာရော့ စတား အိုင်ယန်ဘရောင်းနှင့် ပေါ့ စတား နာတာလီအင်ဘဂူဂလီယာ စသည့် 
ကမ္ဘာကျော်သည့် အထင်ကရများ ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်....
သူ့ ရဲ့ ပြကွက်ဆန်း အတွဲ ၁ တွင်တော့ သူ့ ရဲ့ နာမည်ကျော် လေထဲမြောက်တက်၊ ဈန်ပျံသည့် ပြကွက်ကိုပြ
သခဲ့ ပြီး နာမည်ကျော် မီယာမီကမ်းခြေတွေလည်းကလေးမလေးတစ်ယေက်ရဲ့ နေလောင်အသားအရေအ
ကွက် ကိုလည်း ရွေ့ လျားအောင်လုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
တသွင်သွင်စီးနေသည့် သိမ်းမြစ်ရေပြင်ထက်ဝယ် မလှုပ်မယှက်တောင်ရပ်ပြနိုင်ခဲ့ တယ်...
မျက်လှည့် အစ ဖဲချပ်က....
ဒီမောင်ကို အားပေးသူအမာခံပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ Coldplay အဖွဲ့ မှ အဆိုတော် ခရစ်မာတင် နဲ့ 
သူ့ ရဲ့ ဇနီး နာမည်ကျော်မင်းသမီး ဂွင်းနက်ပဲထရိုး တို့ လည်းပါဝင်ကြတယ်...
Fast hands: Dynamo began his magic career learning card tricks from his grandfather on an estate in Bradford but now hasacelebrity fanclub that includes the likes of Coldplay singer Chris Martin and his wife Gwyneth Paltrow
ဆက်လက်တင်ဆက်ဦးမည့် မျက်လှည့် ဆရာရဲ့ ပြကွက်ဆန်းများတွင် မိုဘိုင်းဖုံးတစ်လုံးကို ဘီယာပုလင်းထဲ
သို့ ရောက်အောင်ထည့် သွင်းခြင်း၊ သြစထရီးယန်းတောင်တန်းများမှ နှင်းများအား စိန်တုံးလေးများအဖြစ်သို့ 
ပြောင်းလဲပြခြင်းနှင့် ဟောလီးဝုဒ်မှ နာမည်ကျော် ချတိုးမားမောင့် ( Chateau Marmont ) ပြတိုက်တွင် လိပ်
ပြာရုပ်များအား အတောင်တစ်ဖျတ်ဖျတ်ခပ်ကာအသက်သွင်း ပြစေမည့် ပြကွက်များလည်း ပါဝင်ဦးမှာဖြစ်ပါ
ဖရိန်းဟာ မျက်လှည့်ပညာကို ၎င်းနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ ရာ ဘရက်ဖို့ ရှိ ဒဲ့ ဖ်ဟေးလ် ခြံဝင်းကြီးထဲတွင် အဖိုးဖြစ်
သူထံမှ နှစ်ရှည်လများသင်ယူခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ပြကွက်များအား နာမည်ကျော်ရုပ်သံ လိုင်းအမှတ် ၄ မှ
" ဒိုင်နမို၏ စိတ်ကူးအတွေးများ" အမည်ဖြစ့် ထုတ်လွင့် ပြသခွင့် ပြုခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ယနေ့ အခါမှာတော့ သူရဲ့ မျက်လှည့် ပြပွဲများတွင် ဟစ်ဟော့ ပ် တေးဂီတနှင့် အကသရုပ်ဖော်များကိုပါပေါင်း
စပ်ထည့် သွင်းပြသခဲ့ ပြီး သူ့ ရဲ့ စွမ်းရည်ပြကွက်များကို " Snoop Dogg's Fatherhood " အစီအစဉ် စသည့်
ရုပ်သံပြပွဲအစီအစဉ်များတွင်ပါ ဖိတ်ကြားပြသစေခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအထိ ၎င်းအနေနှင့် Underground Magic နှင့် Concrete Playground အမည်ရှိ မျက်လှည့် ပြကွက်
ဆန်း ဒီဗီဒီ နှစ်ခွေ ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...
ဒေးဗစ်ကော့ ပါးဖီးထက်တောင်နာမည်ပိုကြီးမယ့် ဆရာပဲ...
Watch the video below to see Dynamo in action on Sport Relief...
His previous tricks have included making Little Britain star Matt Lucas levitate beforealive audience at Arsenal's Emirates Stadium, and turning signed lottery tickets into cash in front of Robbie Williams and Davina McCall as part of BBC's Sport Relief live programme, as you can see on the video below.
The magician's spectacular tricks in the coming series include him transportingamobile phone intoaglass beer bottle, turning snow into diamonds in the Austrian mountains and bringingaflutter of butterflies to life in Hollywood's famous Chateau Marmont.
He has so far released two Dvds; Underground Magic and Concrete Playground.
Posted by peter kyaw | at 8:59 PM |
တန်ခိုးကို သိပ်ကိုးကွယ် ချင်တဲ့ မြန်မာပြည် လူထု(အချို့) အတွက် ပေးကြည့်ချင်လိုက်တာ.. အဲဒီမှာ ဖင်ထောင်ပြီး ကန်တော့ကြလို့။
ကျနော်က မျက်လှည့်ဆို ဟိုငယ်ငယ်ကတည်းကတအား